Izindaba - Umbiko wezindaba zeqhwa le-SXY-M-SG400
Njengamanje, izindawo zokungcebeleka ezishushuluza ezingaphezu kwama-50% ezweni lethu azinazo izinto zokuhlanza iqhwa, futhi ingxenye enkulu yabahlanzisi beqhwa abahlome ngayo yimishini eseceleni, ekhombisa ukuthi kunemakethe ebanzi yabahleli beqhwa. Futhi izinkampani zakwamanye amazwe ezikhiqiza abagadli beqhwa cishe zicindezela imakethe yomhlaba wonke yokuhlanza iqhwa ephezulu. Yize imishini yokunyathela iqhwa yasekhaya seyakhiwe futhi yakhiqizwa cishe iminyaka eyisithupha, imikhiqizo yamandla aphezulu ephezulu ayikabi nalutho. Eminyakeni yamuva nje, inkampani ye-HBIS Xuangong izibophezele ocwaningweni nasekuthuthukiseni nasekusebenziseni abahlanzisi beqhwa abasezingeni eliphezulu abasuselwa endaweni yokuqala ephezulu yokufeza ukuthuthuka okuhlukahlukene kwenkampani. Isicoci seqhwa i-SG400 sikhishwe ngempumelelo kulayini womhlangano ngoJanuwari 2018, kwephula ubuchwepheshe bangaphandle kanye nokuzimela kwentengo emkhakheni wabashisi beqhwa nokugcwalisa igebe emikhiqizweni efanayo yasekhaya.
Ukukhiqizwa kwemishini kaHBIS Xuangong sekwenze intuthuko embonini yeqhwa neqhwa. Umklamo wezimboni we-groomer yeqhwa, uhlelo lokulawula ugesi, uhlelo lokuhambisa u-hydraulic, kanye nohlelo lwe-chassis lokuhamba kuzuze ukwakheka okuzimele kuzixhumanisi ezibalulekile zobuchwepheshe. Isihlanzisi seqhwa i-SG400 isebenzisa uhlelo lokuhambisa i-hydrostatic olulawulwa ekhaya. Ifosholo langaphambili leqhwa linezikhombisi-ndlela zokunyakaza eziyisishiyagalombili, kanti igeja langemuva leqhwa ukunyakaza okunezindlela ezine. Uhlaka lwenziwe ngenani elikhulu lensimbi engamelana nokushisa okuphansi, kuhlanganiswe nabakhasi bokucindezela abanelungelo lobunikazi eliphansi. Ekhumbini, iwindi langaphambili lisebenzisa ubuchwepheshe bokuqhuma bokushisa obukabili, futhi isibambo sezindiza esine-bionic sithuthukisa ulwazi lokushayela lwe-opharetha.
Ngokubheka imvelo nesikhathi sokusebenza kwensimu yeqhwa, inkampani ye-HBIS XuanGong nayo yengeze ukucabanga okuningi ekwakhiweni: i-cab isebenzisa ifasitela elingaphambili elinamandla okuqhuma okuphindwe kabili, futhi indlela yokushisa isetshenziselwa ukubhekana izimo zokusebenza ezikhethekile zezintaba eziphakeme nemithambeka emikhulu nemimoya enamandla. Ivikela abashayeli nezinsimbi zokunemba, futhi ingaphendula ngokunembile nangokuzwela ezindaweni ezinokushisa okuphansi, iqinisekise ukuphepha komsebenzi wasebusuku; ukusetshenziswa kwethrekhi entsha yenjoloba ayigcini ngokuhlangabezana nezidingo zokulinganiswa komgwaqo weqhwa, kodwa futhi kunciphisa kakhulu isisindo somshini wonke. Esivivinyweni sokuqala ngaphansi kwezimo zangempela, isihlanzisi seqhwa i-SG400 sathola isilinganiso sokulinganisa esingu-98%.
Njengamanje, isihlanzisi seqhwa i-SG400 ihlolwe ezindaweni zokungcebeleka ezishibilika eChongli, futhi ikhiqize "iqhwa le-noodle" elicijile kakhulu. Lesi sikhulisi seqhwa saziwa yimakethe futhi kulindeleke ukuthi sibe ngumkhiqizo wokufaka isicelo kuma-Olimpiki wasebusika ka-2022.